समाचार – Page 284 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
वातावरण मैत्री सहर बनाउँछौं-जिसी
पोखरा, २८ वैशाख । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत माग्न नेकपा एमालेका उम्मेदवार यति बेला घरदैलो र चुनावी सभामा व्यस्त छन् । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेद्वारसहित नेता कार्यकर्ता सक्रिय रुपमा..
सबै ताल जोड्ने लिकंरोड बनाउँछु-कुवँर
पोखरा, २८ बैशाख । नेपाली काँग्रेस पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार रामजी कुँवरले तालैतालको महानगरलाई सुन्दर र सफा शहर बनाउने अठोट लिएका छन् । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सातै ताल जोड्ने लिंक रोड निर्माण गर्दै पर्यटकीय विकासको आधारशिला तयार..
शान्ति र समृद्धि काँग्रेसकै नेतृतवमा
पोखरा, २८ वैशाख । नेपाली काँग्रेस पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १४ ले चुनावी प्रचारप्रसारकै क्रममा चाउथे चोकमा बुधबार कोण सभा सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा। शेखर कोइरालाले देश काँग्रेसमय..
उपमेयर उम्मेदवार सरस्वतीले तलब नलिने
पोखरा, २८ बैशाख । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार सरस्वती गुरुङले आफू स्थानीय निकायको चुनावमा बिजयी भए तलब सुविधा नलिने बताएकी छिन् । उनले आफूले पाउने तलब सडक बालबालिका र अनाथको शिक्षामा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाईन् । गुरुङ नेपाली..
ख्याल गर्नुस्- मौन अवधी उममेदवारी रद्ध होला
पोखरा, २८ बैशाख । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने आज अन्तिम दिन हो । मतदान हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखिको अवधिलाई निर्वाचन आयोगले मौन अवधि भनेको छ । यो अवधि विहीबार राति १२ बजेदेखि प्रारम्भ हुनेछ । मौन अवधिमा कुनै पनि दल र उम्मेदवारले..
उपप्रमुखका उम्मेदवार कोईरालाको प्रचार तिब्र
पोखरा, २८ बैशाख । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिएका सिरोज कोइरालाको प्रचार तिब्र पारिएको छ । फरक शैलिबाट प्रचार गरिरहेका कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा जोड दिएका छन् । पोखराको अस्थित्व जोगाईराख्नका लागि आफुँले उम्मेदवारी..
गोरखामा एमाले कार्यकर्ताको कुटाईबाट यदु लामिछाने सख्त घाईते
प्रकाशित मिति: २७ बैशाख २०७४, बुधबार
गोरखा, २७ बैशाख । गोरखाको भिमसेन गाउँपालिकास्थित तान्द्राङमा एमालेका कार्यकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेसका यदुप्रसाद लामिछानेलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन् । गाउँपालिकाको वडा नं ५ बगुवामा आयोजना गरिएको कांग्रेसको चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रममा सहभागी..
महानगरका स्वतन्त्र उम्मेदवार कोइरालालाई ११ प्रश्न
पोखरा, २७ बैशाख । सिरोज कोइराला युवा ब्यवसायी हुन् । उनले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको उपमेयर पदमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका छन् । उनको उमेदवारी अहिले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा चर्चाको विषय बनेको छ । उनैसँग हामीले ११ प्रश्न राखेका थियौं । १. उपमेयर भएर..
को हुन् उपप्रमुखकी उम्मेदवार गुरुङ ?
पोखरा, २७ बैशाख । सञ्चार कर्मबाट ख्याती कमाएकी सरस्वती गुरुङ पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएर चर्चामा छिन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पोखरा लेखनाथ महानगरका लागि उप मेयर पदको उम्मेदवार उनले आफु निर्वाचित भए सरकारी तलब सुविधा नलिने घोषणा गरिसकेकी..
पोखरामा काँग्रेसको चुनावी पदयात्रा
पोखरा, २७ बैशाख । निर्वाचन आचारसंहित अनुसार चुनावी प्रचारका लागि एक दिन मात्र समय बाँकी रहदा पोखरा लेखनाथ महानगरका उम्मेदवारहरुले प्रचार अभियानलाई तिब्रता दिएका छन् । घरदैलो र वडा स्तरीय चुनावी सभामा सहभागी हुदै आएका पोखरा महानगरका कांग्रेस उम्मेदवार..
काठमाडौं - अमेरिकाका सामाजिक अभियन्ता तथा गैर आवासिय नेपाली संघ एनआरएनए अमेरिकाका बोर्ड अफ.. ...
अमेरिका - एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीले कोरोना संक्रमित नेपाली.. ...